Maxay yihiin rajooyinkaaga sanadka cusub sideed u fulisaa? | Ragga Stylish
Rabitaankaaga sanadka cusub ma rumoobi doonaa?
Paco Maria Garcia | | dhaqanka
Wax walba waxay ahaayeen codsiyada rabitaanka sanadka cusub oo dhan habeenkii dhammaadka sanadka, dhalanteedyo, rajo, iwm.. Laakiin, miyay runti jiraan rajo ah in la fulin doono?
Had iyo jeer waxaa la yiraahdaa rabitaanka wax in la fuliyo waa qeyb ka mid ah dabeecadda aadanaha. Bilowga sanadka cusub ayaa ah waqtiga ugu haboon. Dhamaadka sanadka chimes wuxuu calaamadeeyaa dhamaadka hal xilli iyo bilowga mid kale.
1 Noocyada rabitaanka
2 Sidee loo rumeeyaa rabitaankeena?
3 Rabitaano guud oo dheeri ah
ka rabitaanadu badanaa waa nooc kasta, mid shaqsiyeed ama shaqo la xiriirta Kuwaas waxaa ka mid ah sida caadiga ah ujeedka wanaagsan ee jimicsiga, bilaabista sameynta isboortiga iyo jimicsiga, koorso Ingiriis ah oo awood u leh inuu ku safro adduunka, iwm.
Markuu waqtiga cusub dhammaado sannadka cusub, aan tagno qiil u sameynta daahitaanka hirgelinta himilooyinkaas, iyadoo loo aaneynayo "waqti la'aan"”. Xaqiiqdu waa qorshe xumo iyo abaabul xumo, caajis wanaagsan, iwm.
Ugu dambeyntii waxa aan sameyno waa isku qasno rabitaankeena "mucjisooyin", iyadoo ka fikiraysa in waxyaalaha wanaagsan ay dhici doonaan innaga oo aan waxba ka qabanayn dhankeenna.
Sidee loo rumeeyaa rabitaankeena?
Ficil ahaan, rabitaanku waa himilo xaq ah oo lagu saleeyo qofka himiladaas leh dhamaadka sanadka, ama wakhti kasta oo kale, si loo gaaro taas oo dadaal iyo habab ku filan lagu maal galiyo.
ka rabitaanka waa in la beeniyaa, iyo sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo waa in la dhigo macneyaasha si kuwani loo fuliyo.
Rabitaano guud oo dheeri ah
Waxaa jira raba in aan dhammaanteen weydiisanno sannadka cusub. Tusaale ahaan, kuwa laxiriira joojinta falalka xadgudubka jinsiga, siinta dadka ku nool dariiqa guri ay ku noolaadaan, iyo kuwa kale oo badan.
Qaab wanaagsan oo loo hirgaliyo himilooyinkan bulshada anfacaya ayaa ah ka fikir sida aan qof walba u caawin karno, Sida ugu fiican ee aan awoodno.
Ilaha Sawirka: Fikradaha Cusub / Erayada cusub ee jacaylka
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Rabitaankaaga sanadka cusub ma rumoobi doonaa?
Ku hel lahjad preppy jiilaalka shantaan qaybood
5 sharci oo isku dhafan xarig, shaati iyo suud